Xidhmada Assam Tour ee Best & Affordable Wixii Faahfaahin dheeraad ah ka wac + 91-993-702-7574
Bhubaneswar Puri 1 Maalmaha / 2 Maalmaha
Booqashada khaaska ah ee Bhubaneswar
Bandhigyada Bandhigga Bhubaneswar
Safi Safarka Gaarka ah
BhitarkanikaBhitarkanika National Park waa habka labaad ee deegaanka ee Hindiya. Sandbalka Pebbles Bhitarkanika Dalxiisku wuxuu kuu oggolaan doonaa inaad la kulanto quruxda caanka ah ee qoyaanka. Dhulka dhulgariirka cagaaran, shimbiraha iyo dhoobada, yaxaasyada qamriga, qulqulaha biyaha, hareeraha hareeraha ku hareeraysan ee shimbiraha shimbiraha iyo dabeecadda dabiiciga ah, waxay soo gelisaa martida soo dhaweynta iyo meelaha fog fog si ay u dhistaan ​​meelahan gaarka ah ee dalxiiska . Cilmi-baadhayaasha, Culimada, Dabeecadda Dabeecadda iyo Dalxiisayaasha waxay leeyihiin cunto badan oo loogu talagalay fikirka iyo sahaminta. Bhitarkanika Dalxiisku wuxuu daboolayaa dhammaan dhinacyada xiisaha leh. Meeshu waxay u taagan tahay mid ka mid ah abuurnimada ugu fiican. Bhitarkanika waa deegaan gaar ah oo ah Mangrove Forests oo la jaray dhismooyin badan iyo guryo dabacsan oo ku yaal degmada Kendrapara ee Odisha. Mid ka mid ah hannaanka ugu weyn ee Mangrove ee Hindiya, Bhitarkanika wuxuu ku yaallaa flor iyo faunas kala duwan. Iyada oo Sandbirdoonka Qalabka Hubka ee Bhitarkanika baakadaha dalxiiska aad ka heli karto xiisaha aad raadineysay. Kala duwanaanta biyu-gaar ah ayaa soo jiidata dadka soo booqda dabiiciga dabiiciga ah. Bhitarkanika National Park waa hoyga ugu caansan ee lafaha Leopard, bisadaha kalluumeysiga, bisadaha jungle, dhogorta duurjoogta ah, geedka jilicsan, sambar, jasiiradda, yaxaaska, yaxaasiga, yaxaasiga qayb ahaan juus ah, python, king cobra, kormeeraha biyaha, terrapin, badda dameeraha, boqoradda, riwaayadaha, hornbill, bare-madaxa, boodhka Brahmani, pintail, ...
Xilliyada Habeenka / Maalmaha 4 Bhitarkanika 5
Uga wareeji socotada adiga kula socota Sanduuqa cows Assam Tour Package. Assam wuxuu leeyahay dalxiis dalxiis oo loogu talagalay nooc kasta oo safar ah, wuxuu noqon karaa qof jecel dabeecadda, gardarrada, xiisaha xayawaanka, lover daraawac ama sawirqaade. Xuduudaha ay la wadaagaan Bhutan, Nagaland, Manipur iyo Mizoram, Assam waa waddan qurux badan oo loo yaqaan 'albaabka wadada Bariga Waqooyi'. Assam Tour Package wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sahamiso meelahan aan la aqbalin. Assam waa dhul qurux badan oo qurux badan, oo ah gobolka meesha Brahmaputra uu u socdo. Xirmada Bandhigga ee Assam waa midka ugu haboon dabeecadda, dhaqanka, iyo taariikhda. Baakadahaan waxaa si gaar ah loogu talagalay khabiirada safarka si ay u bixiyaan khibrad fasax ah oo loogu talagalay dadka safarka ah. Cunto cimilo qallafsan, dabeecada neefta leh, hareeraha shaaha, shimbiraha ceelka, dhulgariir wanaagsan iyo jawi qaali ah, Assam waa meel aad naftaada ku nasan karto. Package Assam waxay fulin doontaa khibraddaada safarkaaga.
Assam waxaa ka buuxa dhirta iyo faunada yaryar, quruxda muuqaalka quruxda ee buuraha, webiyada iyo bannaanbaxa, iyo dhaqanka quruxda badan ee fanka iyo xafladaha. Waxaad la kulmi kartaa Safarka ugu Fiican ee Assam Tour with Sandbirdhiga Sandbabka ee Assam Tour Package. Assam waa soo saaraha ugu weyn ee Timber iyo Tea ee waddanka iyo wuxuu leeyahay Hindisaha ugu da'da weyn ee Hindiya. Assam waxaa kale oo uu ka mid yahay Shidaalka, Batroolka Dabiiciga ah, Coal, Leedheer iwm. Assam waa dhul qarsoodi ah, nolol iyo hindisooyin. Waa mid ka mid ah Dawladaha ugu caansan India. Assam sidoo kale waxaa loo yaqaanaa alaabooyinka farsamada gacanta ee laga sameeyay bakeer, bamboo, buruun iwm. Diyaar u noqo in aad sahamiso dhulkan qarsoodi ah oo leh Sandbirdada Dalxiiska.
Kaziranga ilaa Shillong ilaa Guwahati
Shillong iyo Guwahati
Barnaamijka Habeenada 03
Saddexda Bariga Bariga
Shuruudaha iyo Xaaladaha Nidaamka Bixinta Siyaasadda Joojinta blog Kurtumm Nala soo xiriir Khariidadda bogga
Sandbirdada Cagaaran ee Hubka © 2019. Dhamaan xuquuqda la keydiyay
blog Kurtumm xiriirka
© 2019 Sandbirdhisyada cagaaran.
ARAGTI BULSHA BULSHADA
Ku qor faahfaahintaada hoose si aad u codsato dib u celinta oo aan dib ula soo xiriirno sida ugu dhakhsaha badan.
magaca * Taleefanka *